Nahoana ny Repoblika Islamika no matahotra an’i Nasrin Sotoudeh? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2019 5:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, Français, Português, русский, English
Sary orizinaly avy amin'ilay mpanao sariitatra Iraniana, Assad Binakhahi. Nahazoana alalana. Ny teny amin'ny teny Persiana dia maneho ny fehezan-tenin'i Nasrin Sotoudeh.
“Manafintohina”, “tsy rariny”, “devoly” sy “henatra mitabataba” no anisan'ireo teny nolazain'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy Iraniana maro ao amin'ny media sosialy tamin'ny fandrenesena ny vaovao mahatohina fa voasazy higadra 38 taona an-tranomaizina sy kapoka karavasy in-148 i Nasrin Sotoudeh, Iraniana mpisolovava malaza mpiaro ny zon'olombelona noho ny fiarovany ny zon'ny vehivavy sy ny fanoherany ny lalànan'ny hijab tsy maintsy arahina ao amin'ny firenena.
Nanambara ny vaovao tao amin'ny pejiny Facebook tamin'ny 11 Martsa 2019 i Reza Khandan, vadin'i Soutoudeh.
Nosamborina tany an-tranony tamin'ny volana jiona lasa teo ity mpiaro ny zon'olombelona mavitrika izay matetika manohitra ny fanamelohana ho faty ity. Ireto avy ny fiampangana: “mandrisika kolikoly sy fivarotan-tena”, “manao fihetsika manota ampahibemaso … miseho amin'ny vahoaka tsy manao hijab”, ary “manakorontana ny filaminam-bahoaka.”
Na dia nanao fanitsakitsahana maro momba ny zon'olombelona aza ny Repoblika Islamika nandritra ny efapolo taona, dia henjana loatra ny sazy azon'i Sotoudeh, na dia amin'ny firaketana an-tsoratra ratsy dia ratsy momba ny zon'olombelona azon'ny rafi-pitsarana Iraniana aza.
Inona no tian'ny Repoblika Islamika porofoina amin'ity sazy henjana ity? Ary nahoana ireo mpitondra ao Iran no matahotra an'i Soutoudeh?
Mihevitra ilay manam-pahaizana momba ny hozatra sady mpiaro ny zon'olombelona Mahmood Amiry-Moghaddam monina any Norvezy fa mitolona ho amin'ny fahavelomany ny Repoblika Islamika. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices dia nilaza izy fa:
Mamakivaky ny iray amin'ireo kriziny ratsy indrindra tato anatin'ny 40 taona ny Repoblika Islamika. Very mpanohana maro izy ireo tao anatin'ny sivy taona farany. Mihamafy ny fahantrana ary tsy afenina intsony ny kolikoly midadasika ao anatin'ny rafitra. Mihabetsaka ny tsy fahafalian'ny olona. Tsy voafetra ho an'ny manam-pahaizana sy ny saranga antonony an-tanàn-dehibe intsony ny hetsi-panoherana: Manohitra ny fahefam-panjakana isan'andro ireo mpiasa, mpampianatra, mpianatra, vehivavy sy antokon'olona hafa. Mitolona ho amin'ny fahavelomany ny Repoblika Islamika. Ao anatin'ny toe-javatra tahaka izao, dia heverin'ny manampahefana fa toy ny loza mitaotao goavana izay olona mety mahavita mitarika fanovana. Nasrin Sotoudeh no olona tahaka izany. Be herim-po izy, afaka mifandray amin'ny olon-tsotra, mijoro ho amin'ny zon'olombelona fototra, tsy nandao ny firenena izy na dia teo aza ny faneriterena sy ny fanenjehana ary ny fanorisorenana nandritra ny taona maro, ary vehivavy izy. Ananan'i Nasrin Sotoudeh ny rehetra hahatonga azy ho mpitarika. Heveriko fa tsy maintsy miharihary ao anatin'ireo toe-javatra ireo ny sazy vao haingana nomena an'i Nasrin. Ezaka feno tahotra hanampenam-bava ny mpitarika vao misondrotra sy fandefasana famantarana ho an'ny olona rehetra izay mety hitondra fiovana izany.
Amin'ny fangatahany milamina mba hanova ny fiarahamonina Iraniana, manaraka ny dian'i Henry David Thoreau, Gandhi na Martin Luther King i Sotoudeh.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Ramin Jahanbegllo, filôzôfy Iraniana-kanadiana sady sojabe-lefitra sy Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Foibe Mahatma Gandhi momba ny fandriampahalemana hoe:
Ny herim-po ara-maoraly ananan'i Soutudeh amin'ny maha-mpisolovava vehivavy azy dia fakan-tahaka ho an'ireo izay mitlolona ho amin'ny lalàna, ny rariny, ny zon'ny vehivavy ary ny fandavana herisetra ao Iran sy manerana izao tontolo izao.
Nanohitra mafy ny fanamelohana an'i Sotoudeh ny fiarahamonina iraisampirenena. Nanameloka ny sazy an-tranomaizina tamin'ny “teny henjana indrindra” i Etazonia, ary ny Vondrona Eoropeana kosa namoaka fanambarana miantso ny sazy ho “fivoarana mampiahiahy”. Nanamarika ny fanambaràn'ny Vondrona Eoropeana fa voaheloka taorian'ny fitsarana tsy natrehany i Sotoudeh, mpandresy tamin'ny loka Sakharov tamin'ny taona 2012, ary nahitana fandikan-dalàna hafa ihany koa tamin'ny fizotry ny raharaham-pitsarana.
Nanao fanangonan-tsonia ny Amnesty International, mangataka amin'ny olona mba hiantso ny Mpitarika Faratampon'i Iran hamotsotra an'i Nasrin Sotoudeh avy hatrany sy tsy misy fepetra, ary hanafoana tsy misy hatak'andro ny saziny.
Dr. Amiry-Moghaddam, izay mpiara-manorina sady mpitondratenin'ny FTMF=ONG Zon'Olombelona Iraniana, mihevitra fa betsaka ny zavatra tokony hatao ankoatra ny fanangonan-tsonia sy ny fanambarana, ny vondrona Eoropeana ohatra afaka mandray andraikitra lehibe. Nilaza tamin'ny Global Voices izy hoe:
Tsy tokony holeferin'ny fiarahamonina iraisampirenena ary indrindra indrindra ireo mpiara-miasa lehibe amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'i Iran ao Eorôpa ity sazy ity. Tsy ampy ny mamoaka fanambarana na hetsi-panoherana tsy misy vokany ara-politika. Tokony hametraka fitakiana mazava eo anoloan'i Iran ny vondrona eoropeana. Tsy ny fampiasana ny ezaka rehetra hanavotana ny JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action (drafitr'asa iombonana, izay fantatra amin'ny anarana hoe fifampiraharahana nokleary ao Iran] no tokony hatao. Amin'izao fotoana izao, tokony ho laharam-pahamehana amin'ny fifampiharaharahana eo amin'ny roa tonta (Etazonia sy Iran) ny fandaharan'asa momba ny fepetra ho an'ny zon'olombelona. Tsy ny zavatra tokony hatao ihany izany fa izany ho fahendrena tokony hatao koa.
Ankoatra an'i Sotoudeh, maro ireo mpiaro ny zon'olombelona hafa izay nogadraina na iharan'ny teritery goavana ataon'ny Repoblika Islamika. Nampitandrina ny mpanao fanadihadiana ao amin'ny Firenena Mitambatra momba ny zon'olombelona ao Iran, Javaid Rehman vao haingana, fa “mampiseho fihetsika miha-henjana hatrany ataon'ny fanjakana ireo endrika mampiahiahy momba ny fampitahorana, fisamborana, fanenjehana sy fampijaliana ireo mpiaro ny zon'olombelona, mpisolovava ary ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny mpiasa.”